Omabonakude abahamba phambili baka-2017 ongabathenga | Izindaba zamagajethi
Ama-TV ahamba phambili ka-2016
Iningi lethu sonke siyathanda ukukwazi ukujabulela ama-movie esiwathandayo, uchungechunge nemidlalo ku-TV enhle ekhaya, enesikrini esikhulu nesithombe esihle nekhwalithi yomsindo, kepha nathi asizimisele ukushiya ikhadi lethu lesikweletu linyakaza. Ngenhlanhla, amathelevishini awumkhakha womkhiqizo esingawuvuseleli minyaka yonke, njengoba kuvame ukwenzeka kuma-smartphone, kepha siwathenga ngenhloso yokujikeleza impilo yeminyaka emihlanu kuya kweyishumi. Futhi lokhu kusinikeza inzuzo enkulu ngaphezu kweqiniso lokuthi, ngaphandle kwenhlekelele, kuzothatha isikhathi eside ukutshala imali kuthelevishini futhi.
Leyo nzuzo ayikho enye ngaphandle kwamandla jabulela i-TV esezingeni eliphakeme ngentengo evumayo, futhi ngalokhu, into elula njengokubheka amathelevishini aphume ngonyaka owedlule. Ngokuvamile, noma iyiphi i- amathelevishini angcono ka-2016 banokuhluka okuncane ngamamodeli avele kulo nyaka, noma kunjalo, singonga imali enhle, ngokwesibonelo, esingayabela ukuthola uhlelo lomsindo, isidlali esisha se-BluRay, usikhokhele idlanzana lezinkokhelo zanyanga zonke zeNetflix, noma noma yini oyizwayo. Ngakho-ke, ukukunika isandla emsebenzini wakho wokuqalisa kabusha, namuhla sikulethela ukukhetha nezinye ze- amathelevishini ahamba phambili ka-2016 ngentengo enhle kakhulu
1 I-Sony ZD9
2 IPanasonic TX-40DXU601
4 I-LG OLED65E6V
5 I-Sony KDL-40WD650
7 I-LG OLED55C6V
9 IPhilips 43PUH6101
10 I-LG 43LH590V
Siqala ngalokhu I-Sony ZD9, ithelevishini etholakala ngosayizi abahlukahlukene be-screen (65, 75 no-100 inches), ngakho-ke ayiwafanele amakamelo amancane. Qaphela, ngoba intengo yayo iphezulu, kodwa futhi nekhwalithi yayo. Bala kanye design lihle kakhulu futhi nenhle, Ukulungiswa kwe-4K iyahambisana HDR, Uhlelo lokukhanyisa I-Backlight Master Drayivu, X1 Extreme image processor, woza, uzojabulela ikhwalithi yesithombe ehamba phambili. Ngaphezu kwalokho, ihlanganisa i-Android TV ukuze ukwazi ukusizakala ngezinhlelo eziningi.
Ngobukhulu obunesizotha kakhulu sinethelevishini iPanasonic TX-40DXU601, ithuluzi eline- Isikrini se-IPS esingu-40-intshi nokulungiswa okwazi ukufinyelela amaphikseli we-4K UHD 3.840 x 2.160. Vele, ukuklanywa nakho kudonsela ukunaka kwethu, ngamafreyimu amancane kakhulu nezinyawo ezinhle kakhulu ezihlaselwe. Vele, ngokungafani neyangaphambilini, le modeli ayihambisani nokuqukethwe kwe-HDR kepha noma kunjalo, ikhwalithi yinhle ngendlela emangalisayo, ifaka phakathi Firefox njengohlelo lokusebenza lwe-Smart TV futhi inenombolo enhle nokuxhuma okuhlukahlukene i-USB, HDMI, Ethernet nokuningi.
Siya eNingizimu Korea ukukhuluma ngale Samsung UE49KS8000, ithelevishini ene Isikrini se-intshi se-49 (ibuye itholakale ngamasentimitha angama-55 kanye nama-65) ngokulungiswa I-4K UHD, Ubuchwepheshe be-Quantum Dot Colour, uhlelo lwe-HDR 1000, ngokuhlangene, olusinikeza ikhwalithi yesithombe engenakuqhathaniswa, nabamnyama abajulile impela, imibala egqame kakhulu negqamile ...
Isistimu ye-smart TV inesistimu yokusebenza Tizen OS (kusuka endlini uqobo), futhi futhi inezinhlobonhlobo eziningi nezixhumi ukuze ukwazi ukuxhuma amanye amadivayisi akho: i-HDMI, i-USB, i-WiFi, i-Ethernet ...
Enye inketho yekhwalithi ephezulu yile Ayikho imikhiqizo etholakele., ithelevishini ene Isikrini se-OLED esingu-65-intshi nesinqumo esikhulu I-4K UHD ngohlelo lweDolby Vision HDR. Ngenxa yale phaneli, abamnyama bazoba abajule kakhulu owake wababona, izithunzi zizocaciswa kahle futhi imibala izokhanya ngokumangazayo futhi ibe namandla.
Kubuye kube ngumabonakude mncane ngokwedlulele enesistimu yomsindo enhle edizayinwe nguHarman Kardon, izixhumi eziningi ne-Smart TV enohlelo lokusebenza lwe-webOS. Vele, intengo yayo isenqabile kubasebenzisi abaningi.
Siqhubekela phambili ekukhetheni kwethu ama-TV ahamba phambili ka-2016 ngale Sony KDL-40WD650, i-TV enamandla nenhle, hhayi lawa anikela ngentengo eshibhile futhi ethokozisayo. Ine- Isikrini esingu-40 intshias ngokulungiswa okugcwele kwe-HD Amaphikseli we-1.920 x 1.080 ane-Motionflow XR + system kanye ne-X-Reality Pro processor processor, inqwaba yamagama axakile ahumushela kukhwalithi yesithombe enhle yegumbi lokuphumula noma lokulala.
Su isithombe sicacile, sibukhali, nabamhlophe abahlanzekile, abakhanyayo, nabangaguquguquki abamnyama. Futhi konke lokhu yize kungenasinqumo se-4K.
Futhi kugqamisa i- idizayini, yinhle, yinhle, ejwayelekile kakhulu eSony yaseJapan. Ungakhohlwa amachweba ayo amabili e-USB, okokufaka kwe-Ethernet, amachweba ayo amabili e-HDMI, i-WiFi edidiyelwe nohlelo smart TV.
Siyaqhubeka nolunye uhlobo lwethelevishini yaseNingizimu Korea, lokhu Samsung UE55KS7000, i-TV enhle yesikrini esingu-55 intshi I-4K UHD Amaphikseli angama-3.840 x 2.160 ane-system HDR lokho kwenza nobuchwepheshe Umbala we-Quantum Dot, yini okuhumusha imibala engaphezu kwezigidi eziyinkulungwanefuthi a isithombe esicacile, esihlanzekile nesicijile, sichazwe kahle, enemibala egqamile, abamhlophe abakhaliphile nabamnyama ababukekayo.
Futhi njengokujwayelekile ku-firm, izixhumi zivelele zombili ngokuhlukahluka nangobuningi (I-USB, i-HDMI, i-Ethernet ...), futhi inokuxhumana okuhlanganisiwe kwe-WiFi kanye smart TV ngohlelo lokusebenza kwe-Tizen OS.
Siphinda umkhiqizo nezwe ngoba futhi kufanele sisho i-TV evela eSouth Korea LG, kulokhu imodeli I-LG OLED55C6V, idivayisi efaka iphaneli enkulu ngobuchwepheshe be-LG OLED nosayizi we 55 amayintshi. Akudingeki ukuthi kushiwo, lokhu kuyithelevishini yalabo abangahlali nganoma yini, kepha abafuna ikhwalithi yesithombe engcono kakhulu. Yingakho, ngenxa yobuchwepheshe be-OLED, ungathola abamnyama bajule kakhulu ongakaze ubacabange ngaphambili, ubukhali obumangazayo nokucaca, nemibala ekhanyayo, ekhazimulayo, egqamile. Vele, kuyanikeza Ukulungiswa kwe-4H UHD ngokusekelwa kokuqukethwe kwe-HDR iDolby Vision, ngakho-ke manje ungathokozela ikhwalithi ephezulu kakhulu yochungechunge oluthandayo nama-movie.
Ngaphezu kwalokho, le TV ye-LG OLED55C6V iphinde inikeze izinketho eziningi zokuxhuma (i-Ethernet, i-WiFi, amachweba amathathu e-USB, nezinye izixhumi ezintathu ze-HDMI) ukuze ukwazi ukuxhuma amadivayisi amaningi.
Futhi siyaqhubeka ngaphandle kokusuka emingceleni yaseNingizimu Korea ukucaphuna enye imodeli yakwa-Samsung nokuthi le nkampani, kanye ne-LG, uyabona ukuthi bathatha ikhekhe ngokwamathelevishini angcono.
Lesi sikhathi esizobhekisa kuso Samsung UE65KS9000, «ithelevishini enkulu» lapho uzodinga khona ukuthi ube negumbi lokuphumula elihle njengoba liqukethe okukhulu Isikrini se-intshi se-65 nesinqumo I-4K UHD ifakwe ubuchwepheshe bezithombe ezinhle kakhulu enkampanini: ubuchwepheshe Umnyama omnyama okugwema ukucabanga, ubuchwepheshe, Umbala we-Quantum Dot okuyinto esivele sikhulume ngayo ngenhla, uhlelo I-Advanced Peak Illuminator ukufeza ukugqama okumangazayo, injini yokukala Injini Yesitimela Ye-SUHD enesibopho sokwenza ngcono ikhwalithi nokuxazululwa kwesithombe uma sinesinqumo esiphansi futhi, nohlelo I-HDR 1000.
Futhi konke lokhu kumangalisa Iphaneli eligobile lokho kuzokunikeza ulwazi lomuntu siqu, oluphelele nolokutshala imali, nokuthi unganweba sibonga ukuxhumana kwe-WiFi ne-Ethernet, noma amachweba ayo amathathu e-USB nezixhumi zayo ezintathu ze-HDMI.
Eshu, ngicishe ngakhohlwa! Nge-Samsung UE65KS9000 ungathokozela nezinhlelo zakho zokusebenza eziningi ozithandayo ngoba uhlelo smart TV Ine-Tizen OS njengohlelo lokusebenza.
Kepha akuwona wonke umuntu kuthelevishini azungeze i-Sony, LG, noma i-Samsung, kanye nePhilips, kamuva nje eyaziwa kangcono ngama-light light ayo futhi sizoyisika yazo zonke izinhlobo, inokuthile engakusho ngethelevishini IPhilips 43PUH6101, idivaysi emangalisayo enesikrini Isixazululo se-LED esingu-43 intshi ne-4K (3840 x 2160) okubandakanya smart TV ukuze ukujabulele okuqukethwe okuthandayo kakhulu kuzingxenyekazi ezinjengeNetflix noma i-HBO ngqo, ngaphandle kwesibuko noma okunye okunjalo.
Kungakanani futhi nge Ubuchwepheshe be-Ultra resolution upscaling, ngakho-ke ungajabulela ikhwalithi ephezulu kakhulu noma ngabe izithombe zinikeza isinqumo esiphansi.
Asikwazi ukubeka eceleni i- design, nenhle futhi yesimanje, cishe ngaphandle ozimele, nezinyawo ezisho konke ukuvelela esikrinini. Kepha okuhle kunakho konke yintengo yayo, ubucabanga yini ukuba nethelevishini efana naleyo cishe ama-euro angamakhulu amane? Yebo, kungenzeka.
Ingabe ufuna okuningi? Umsindo ozungezile, isilawuli somsindo esihlakaniphile, umsindo onamandla angu-16 W, izixhumi ezine ze-HDMI, izixhumi ezintathu ze-USB, ukuxhumana kwe-WiFi, ukukhishwa komsindo wedijithali (i-optical), i-Ethernet nokunye okuningi kwenza le TV ibe enye yezinketho ezinhle kakhulu ngekhwalithi yokuhlobana - intengo.
Futhi siqeda ngenye ithelevishini esezingeni eliphakeme futhi engabizi kakhulu. Njengokwedlule, lokhu I-LG 43LH590V 43 "HD egcwele ... kubuye kube cishe ama-euro angamakhulu amane (kwesinye isikhathi noma ngaphansi).
Le modeli ye-LG isinikeza isikrini se- 43 amayintshi ngesinqumo HD Full (1920 x 1080 pixels), ukuxhumana kwe-WiFi ne-Ethernet, smart TV ngohlelo lokusebenza lwe-webOS, amachweba amabili we-HDMI, imbobo ye-USB kanye nedizayini ethe xaxa ngokwengeziwe.
Izikhala ongakhetha kuzo, ngaphandle kokungabaza imodeli yangaphambilini yePhilips inikela ngekhwalithi ephezulu yezithombe nezinketho zokuxhuma ezinkulu, kepha-ke, uma kunomehluko omkhulu wentengo ngesikhathi sokuthenga kwakho, isabelomali sakho siqinile futhi awudingi ukuxhumana okuningi, lokhu kungaba ukukhetha okuhle.
Futhi kuze kube manje ukukhetha kwethu nge amanye ama-TV ahamba phambili ka-2016. Khumbula ukuthi lokhu kumane nje kuyisiphakamiso ngoba kunokunikezwa okubanzi emakethe, kwesinye isikhathi, kwemikhiqizo engaziwa kakhulu kepha ikhwalithi yayo ingasimangaza. Kunoma ikuphi, qhathanisa kahle lapho ukhetha i-TV entsha ngokuya ngezidingo zakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Isithombe nomsindo » Ama-TV » Ama-TV ahamba phambili ka-2016
Ngemuva kweminyaka embalwa besekudingisweni, i-Apple TV ibuyela e-Amazon